Lerma'Soap အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Sń Snook
🚩(1) ရွှေလက်စွပ် လက်ဆောင်
🚩(2) ဘန်ကောက်ခရီးစဉ် လက်ဆောင်ရှိပါသည်။
Online ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ရင် ဘာတွေလိုလဲ?
Members ဝင်လုပ်ရင် ဘာတွေလိုအပ်လဲ?
Members ဝင်ရန် ဗိုက်ဆံကုန်စရာမလိုပဲ
Lerma' Soap (10) ဗူး ဘောင်ချာဖွင့်ဒါနဲ့ Members ဝင်ဖြစ်ပါပြီရှင့်၊၊
3. နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံ လိုပါသည်။
(အကယ်၍ online မရောင်းဖူးပဲ
အခု စတင်ရောင်းချင်တဲ့လူများရှိရင် စိတ်ပူစရာမလိုပဲ)
Online Marketing ပိုင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးဖို့ ယိုးဒယားမှာအောင်မြင်ထားတဲ့ online Marketing ဆရာများနဲ့ ယိုးဒယားစကားပြန်ပါ အခမဲ့သင်တန်းပို့ချပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်တန်းကြေး 🆓 ✅
Online ကိုယ်စားလှယ်ဝင်ထားတဲ့သူအားလုံး အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
#Lerma' Soap# နှင့် အတူ ဝင်ငွေတွဲရှာကြရအောင်
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူငယ်တွေ့အောင် Tag ပေးလိုက်ပါ၊၊
📞 Ph : 09- 250130535
💌 Viber (or) Inbox မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်၊၊